စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: မယ်ခွေ သို့မဟုတ် ချစ်လှစွာသော မမ ဆုမွန်
မယ်ခွေ သို့မဟုတ် ချစ်လှစွာသော မမ ဆုမွန်
မေလေး(ဆုံနိုင်ခွင့်) August 28, 2009 at 4:55 PM
Happy Birthday !!!!! မမဆုမွန်
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ မိဘကိုလုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်သော သမီးကောင်းရတနာလေး ဖြစ်ပါစေရှင့်။
ပြည်စုံ သယ်ရင်း မမက နင်အမအရင်းဆိုတာ နာ့ခုမှသိတယ်။
အိမ်လွမ်းသူ August 28, 2009 at 8:12 PM
ပြည့်စုံ August 28, 2009 at 8:42 PM
မဆုမွန်ရေ.... Happy Birthday ! ပါ... ထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ...
အနော်ဆိုတဲ့ ပြည့်စုံလေးရဲ့ မမ မဆုမွန် အတွက် ဆုတောင်းတွေရော တောင်းဆုတွေရော စုံလို့ပါလား....
တောင်းတဲ့ဆုတွေရော ဆုတောင်းတွေရော အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံပါစေလို့...
မဆုမွန်ရေ.. ကြေငြာထားတယ်နော်.... အစစ အရာရာ ပူစာချင်တုန်းပဲတဲ့...
ပြည့်စုံလေးတို့ မောင်နှမတွေကြည့်ရတာ အားကျလိုက်တာဗျာ... အရမ်းလည်းကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်.... ထာဝရပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ...
မိုးခါး August 28, 2009 at 9:06 PM
မမစုမွန် ဆန္ဒတွေ အမြန်ဆုံး ပြည့်စုံဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင် ..း)
ရွှေပြည်သူ August 28, 2009 at 9:31 PM
အနော်ရေ... ကိုယ်ကိုတိုင်ကလည်း အိမ်မှာ သမီးအကြီးဆုံးမို့လို့ ထပ်တူခံစားပြီး ဖတ်သွားပါတယ်။ ပြည့်စုံရဲ့ အရေးအသားတွေမှာ မျောပါရင်း “အမကြီးတော့ အမိရာ”ဆိုတဲ့စကားကို အပြည့်အဝပုံဖော်နိုင်တဲ့ မမကြီးရဲ့အကြောင်းကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးမွေးညင်း ထမိပါတယ်...
little brook August 28, 2009 at 9:42 PM
အင်း ငါခုချိန်ထိ အဲ့လောက်တောင် သတ္တိမကောင်းသေးဘူး..
အနော့်အမကတော့ စံပဲ... အဖေဖြစ်သူဂုဏ်ယူချင်စရာကောင်းတယ်
မြစ်ကျိုးအင်း August 28, 2009 at 10:06 PM
အခုပဲ မဆုမွန်ဆီမှာ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်...။
အိမ်မှာပဲဟင်းချက်ရင် မျက်ရည်ကျရတဲ့သူက နိင်ငံအတွက် ပေးဆပ်ရင်း
ပဲဟင်းရေကျဲနဲ့ စားခဲ့ရတာကို ဖတ်ရတော့ တကယ်စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။
မဆုမွန်က နိင်ငံအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ သူပါ။
purplemay August 28, 2009 at 10:19 PM
မမ...Happy Birthday ပါရှင့်..
မမ တိုင်းပြည်အကျိုးကို စိတ်ကူးရှိသလို သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ..။
(ညလေးရေ...မမစုမွန်ကို ဒီcomment ပြလိုက်ပါနော်...:))
jr.လွင်ဦး August 28, 2009 at 10:34 PM
အလုပ်တွေ တအားရှုပ်နေလို့ ခုမှရောက်တယ်..
Happy Birthday ပါလို့နော်..
အနော်တို့မိသားစုလေး စိတ်ချမ်းသာနဲ့ အတူနေနိုင်သွားနိုင်ပါစေ။
Yu Ya August 28, 2009 at 11:21 PM
ရင်ဘတ်ထဲမှာ လှိုက်တက်လာအောင်ကို ခံစားသွားရပါတယ်ဗျာ။ နိုင်ငံသားကောင်းရတနာတွေ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုတွေနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာ အသုံးမချနိုင်ရတဲ့အဖြစ်ဟာ ဘယ်လောက်တောင် နှမြောဖို့ ကောင်းလဲဗျာ။
နောင်တစ်ချိန်ဆိုတာရှိပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုအောက်မှာ စွမ်းဆောင်ရတာလောက်၊ ပေးဆပ်ရတာလောက် ဘယ်အားရှိတော့မလဲဗျာ။
ဖြူ August 29, 2009 at 10:26 AM
အနော်ဆုတောင်းပေးသလို.... မမဆုမွန်တစ်ယောက်.. တစ်ချိန်ချိန်မှာ ချစ်တဲ့တိုင်းပြည်၊ ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ ထမင်းအတူလက်ဆုံစားနိုင်မယ့် နေ့လေးအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ပါစေ....
သားကြီး August 29, 2009 at 11:39 AM
‘ကိုယ့်သားသမီးကို နိုင်အောင် မထိန်းနိုင်ဘူး ခင်ဗျားတို့ကိုလဲ ထောင်ထဲ ထည့်ပစ်လို့ရတယ်’ လို့ ပြောတဲ့အဲဒီထောက်လှမ်းရေးတွေကို ဖနှောင့်နဲ့သာကောက်ပေါက်လိုက်ပါ
happy birthday မဆုမွန် အစ်မလိုလူမျိုးတစ်ယောက်
ပြောရရင်..ခုချိန်ထိ နိုင်ငံအတွက် (အမှန်တရားအတွက်)
အုတ်တစ်ပွင့် သဲတစ်ချပ် ပါဝင်ခွင့်မရသေးတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ရှက်မိပါတယ် ။
ဧရာဝတီသား August 29, 2009 at 1:15 PM
မမဆုမွန် နဲ့ အနော်နဲ့က မောင်နှမ အရင်းဆိုတာ အခုမှ သိတယ်။ အနော်တို့ အဖေ ဂုဏ်ယူသလို အနော်တို့လည်း အစ်မကြီး တစ်ယောက် အတွက် တော်တော် ဂုဏ်ယူ စရာပါပဲ။ အနော်မောင်နှမတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ နေ့လေး အမြန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
စိတ်၏ဖြေရာ August 29, 2009 at 2:06 PM
Angel Shaper August 29, 2009 at 4:45 PM
စိတ်မကောင်းပါဘူး အနော်ရေ... ဘာမှတောင် မပြောတတ်တော့ဘူး။
မမဆုမွန်ကို ဟက်ပီဘတ်ဒေးလို့ နော်။
အနော် တောင်းသလိုပဲ တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Angel Shaper August 29, 2009 at 4:53 PM
မကြီး ဆုမွန်အတွက် ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်။
အိပ်ရာဝင်၊ အိပ်ယာထ ဆုတောင်းတဲ့အခါ သတိတရတောင်းပေးနေမယ်။
မကြီး ကျန်းမာပါစေ။ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ မိသားစုနဲ့ အမြန်ဆုံးပျော်ရွှင်ရပါစေနော်။
ahphyulay August 29, 2009 at 8:58 PM
အနော်လေး... ကျွန်တော် တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပါတယ်
ယုံကြည်ချက်တစ်ခု၊အမှန်တရားတစ်ခုအတွက် စွန့် လွှတ်စွန့် စား
ရဲတဲ့အမအတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပဲ ဂုဏ်ပြုမိတယ်၊အလေးပြု
yangonthar August 31, 2009 at 1:51 AM
ကျန်းမာချမ်းသာ အေးမြသာယာပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်
မဆုမွန် August 31, 2009 at 5:26 AM
ကျွန်မမွေးနေ့ကို ဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ ညီမလေးရဲ့သူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကို တကယ်ပဲ လိူက်လိူက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် အရမ်းလဲ ကြည်နူးရပါတယ်..ပေးတဲ့ဆုတွေ အကုန်လုံး အမြန်ဆုံး ပြည့်ရပါစေနော်
တောင်ပေါ်သား September 15, 2009 at 9:35 PM
အမရေ မဆုမွန်ဆီက လာခဲ့ပါတယ် ဖတ်ပြီးမှ အမဆုမွန်ကို ပိုလို့တောင် လေးစားမိပါတယ်း)